CADAADO, Soomaaliya - Wararka aynu ka halayno magaalada Cadaado ee xarunta Baarlamaanka Galmudug ayaa sheegaya in dagaal uu ka qarxay Madaxtooyadda Galmudug, xilli mudooyinkii dambe uu jiray khilaaf madaxda maamulkan u dhaxeeyay.
Dagaalka ayaa wuxuu u dhaxeeyaa ciidamo kawada tirsan maamulka Galmudug, balse kala taageersan labadda garab ee khilaafka uu u dhaxeeyo, kuwaasi oo garab kamid ah hogaaminayo Madaxweyne ku xigeenka ay ku sugan yihiin Cadaado.
Iska horimaadka oo leysku adeegsanayo hubka daran-dooriga u dhaca ayaa waxaa uu yahay mid yimid markii ciidamo daacad u ah Madaxweyne ku xigeenka iyo Afayeenka Baarlamaanka Galmudug loo diiday inay galaan gudaha Madaxtooyadda.
Gudaha Madaxtooyadda waxaa ku jira mas'uuliyiin u badan Wasiiro maamulka Galmudug ka tirsan, Xilldhibaano iyo xubno kale oo siyaasiyiin ah, kuwaasoo Daacad u ah Madaxweyne Axmed Ducaale Gelle [Xaaf].
Rasaasta dhaceysa oo xoogan darteed, Shacabka ayaa waxay sheegayaan inay lasoo dareystay baqdin xoog leh, waxaana dagaalka uu yahay mid sii xoogeysanaya saacadba mida kasii dambeysay.
Lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka.
Laakiin, mas'uuliyiinta qaar ee ku jira gudaha Madaxtooyadda Galmudug ee Cadaado oo u waramay Warsidaha Garowe Online, waxay diideen inay faah-faahiyaan dagaalka.
Colaaddan ayaa kusoo beegmaysa xilli khilaafka ka dhashay awood qeybsiga Galmudug uu cirka isku sii shareeyay, iyadoo dowladda Federaalkana lagu eedeeyay inay ku fashilantay dhexdhexaadinta madaxda maamulkan.
Shir ay IGAD garwadeen ka tahay ayaa Galmudug iyo Ahlu Sunna uga furmay...
Kolonyo galbinaysay Ergayg Qaramada Midoobey oo lagu weeraray Galmudug
War Saxaafaded 06.11.2018. 16:30
Carabey oo daboolka ka qaadey waxa keenay Khilaafka Galmudug [Dhageyso]
Soomaliya 29.05.2018. 11:26
Muxuu Salka ku hayaa Khilaafka Madaxda Galmudug? [XOG CUSUB]
Soomaliya 26.05.2018. 15:27